သူမ ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မှာလဲ ? – Gentleman Magazine
သူမ ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မှာလဲ ?
သူမ ဘယျလိုဆုံးဖွတျမှာလဲ ?
သင်ချစ်ရတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်က သင့်ကို ငြင်းပယ်လိုက်မှာလား၊ ချစ်သူအဖြစ်နဲ့ လက်ခံမှာလား၊ ပြီးတော့ လက်ထပ်ပြီး ဘ၀တစ်ခုလုံးလက်တွဲသွားမှာလားဆိုတာကို သိချင်ပါသလား။ ဒီလိုကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မိန်းကလေးတစ်ယောက်က စိတ်ထဲမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအများကြီးချမှတ်လေ့ရှိပါတယ်။ သူတို့က အချိန်ယူပြီး ဆုံးဖြတ်တတ်ကြသလို သင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ခံစားချက်တွေကအစ အရာအားလုံးကို အသေးစိတ်အထိ စောင့်ကြည့် လေ့လာသုံးသပ်တတ်ကြပါတယ်။
ဒီလိုအဖြစ်မျိုးက လက်ခံနိုင်ဖို့ ခက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မိန်းကလေးတွေက သူတို့အတွက် အဆင်မပြေဘူးထင်ရင် ငြင်းပယ်လိုက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်တတ်ကြပါတယ်။ သင်ငြင်းပယ်ခံရနိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကတော့ –
၁။ သူမကို မဆွဲဆောင်နိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတိုင်းမှာ သူတို့ကြိုက်တဲ့ ယောင်္ကျားလေးပုံစံတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ သင်က ပုံစံမ၀င်ဘူးဆိုရင်တော့ ငြင်းပယ်ခံရမျာ ကျိန်းသေးပါတယ်။ ဆွဲဆောင်မှုရှိဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ မင်းသားရှုံးအောင် ချောလှနေဖို့မလိုပါဘူး။ သူမစိတ်ကို လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းရှိရင် လုံလောက်ပါပြီ။
၂။ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာမရှိလို့ပါ။ သူမအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားစရာမရှိပဲ ပျင်းစရာကောင်းနေမယ်။ စနိုးစနောင့်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်လည်း ငြင်းပယ်တတ်ကြပါတယ်။
၃။ သင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်ကို မကြိုက်လို့ ဒါမှမဟုတ် အလုပ်မရှိလို့ပါ။ ယနေ့ခေတ်မိန်းကလေးတွေက သူတို့ရဲ့ ဘ၀နေထိုင်မှုပုံစံကို ပံ့ပိုးဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့သူမျိုးကို အလိုရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ အသုံးစရိတ်ကို ကာမိအောင်တောင်မှ ၀င်ငွေမရှိတဲ့သူမျိုးဆိုရင် စိတ်မ၀င်စားတတ်ကြပါဘူး။
၄။ သင့်မှာ သူတို့မကြိုက်တဲ့အချက်တွေရှိနေလို့ပါ။ ဆေးလိပ်သောက်တတ်တာ၊ အရက်သောက်တာ၊ မူးယစ်ဆေးသုံးတာ၊ လောင်းကစားလုပ်တတ်တာ ဒီလိုအကျင့်တွေကို မိန်းကလေးတွေက သဘောမကျတတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီအချက်တွေကို ပြင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ နီးစပ်နိုင်ချေရှိပါသေးတယ်။
၅။ မိန်းကလေးစိတ်ကြောင့်ပါ။ ဒီအချက်က ရှင်းပြဖို့ခက်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့နာမည်အစ စာလုံးကို မကြိုက်တာက စပြီး ဘယ်သန်ဖြစ်နေလို့ဆိုတာအထိ အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ ငြင်းတတ်ကြတာမျိုးပါ။
ချစ်သူဖြစ်ပြီဆိုရင် စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းတာတွေ၊ ထိမ်းမြားလက်ထပ်တာတွေအထိ ဆက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အပျော်မစောပါနဲ့ဦး။ ချစ်သူအဖြစ်တွဲနေကျချိန်မှာ လက်ထပ်ဖို့အထိ တွေးထားချင်မှ တွေးထားမှာပါ။ သူတို့က သင့်ကိုလေ့လာသုံးသပ်ဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ကို ချစ်သူအဖြစ်လက်ခံနိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကတော့ –
၁။ သင်ကဆွဲဆောင်မှုရှိလို့ပါ။ သူမသဘောကျတဲ့ အမျိုးသားပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီး သူမကို ရယ်မောပျော်ရွှင်စေနိုင်သူ ဖြစ်ရင် ချစ်သူအဖြစ်လက်တွဲဖို့ တ၀က်လောက်သေချာနေပါပြီ။ သူမကို ချစ်ခင်ကြင်နာပြီး စိတ်ချမ်းသာစေနိုင်ကြောင်း ပြနိုင်ရင်တော့ သူမလက်ကို ကိုင်ရဖို့ သေချာပါပြီ။
၂။ အိပ်ရာထဲမှာ တော်လို့ပါ။ ဒီအချက်က မြန်မာယဉ်ကျေးမှုနဲ့ မကိုက်ညီပါဘူး။ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ အတူနေဖြစ်ပြီးမှ ချစ်သူအဖြစ် ရှေ့ဆက်လက်တွဲတာမျိုးတွေကို ဆိုလိုပါတယ်။ အိပ်ရာထဲကကိစ္စမှာ သင်တို့နှစ်ဦးစလုံးက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော၊ စိတ်ခံစားမှုပိုင်းမှာပါ အချင်းချင်းကျေနပ်မှု ရှိမရှိနဲ့ဆိုင်ပါတယ်။
၃။ သူနဲ့အတူရှိချိန်တွေက ပျော်ဖို့ကောင်းလို့ပါ။ နှစ်ဦးသား အတူရှိနေချိန်မှာ အချိန်ကုန်လို့ ကုန်သွားမှန်းမသိ ပျော်နေရတာမျိုးကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
၄။ သင်ကလိုက်လျောညီထွေနေတတ်လို့ပါ။ နှစ်ဦးသား ဘ၀ကို အပြန်အလှန်လေးစားမှုရှိပြီး အဆင်မပြေနိုင်တာတွေ မတောင်းဆိုတတ်တာမျိုးတွေကြောင့်ပါ။ သင်ကိုယ်တိုင်လည်း အလုပ်နဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာခွဲခြားထားတတ်ပြီး သူမစိတ်တိုင်းကျ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် နေပေးနိုင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
၅။ သူမကိုလေးစားသမှုရှိလို့ပါ။ ချစ်သူအဖြစ်လက်တွဲဖို့ စဉ်းစားနေချိန်မှာကတည်းက သူမကို တခြားသူငယ်ချင်းတွေလို ဆက်ဆံလို့မဖြစ်ပါဘူး။ အလေးထားပြီး ဦးစားပေးဆက်ဆံတာမျိုးတွေကို မိန်းကလေးတွေက လိုချင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကိစ္စကို လွယ်တာလည်းရှိသလို ခက်တာလည်းရှိပါတယ်။ တစ်ချို့တွေက ချစ်သူအဖြစ်နဲ့ လက်ခံလိုက်ပြီဆိုကတည်းက ဆုံးဖြတ်ပြီးသားဖြစ်နေတတ်ပေမယ့် တစ်ချို့တွေကတော့ သူတို့နဲ့ တစ်သက်လုံး လက်တွဲသွားနိုင်သူဟုတ်မဟုတ် အချိန်ယူသုံးသပ်ကြဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ကို လက်ထပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကတော့ –
၁။ သူမကို ပံ့ပုံပေးနိုင်လို့ပါ။ ငွေကြေးကိစ္စတွေကိုချည်းပဲ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ အများကလက်ခံထားတဲ့အတိုင်း ယောင်္ကျားလေးက မိန်းကလေးကို လိုအပ်တဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေ ပေးနိုင်တာမျိုးကို ဆိုလိုပါတယ်။
၂။ သင့်မှာ အလားအလာကောင်းတွေရှိလို့ပါ။ မိန်းကလေးတွေဟာ ရည်မှန်းချက်ရှိပြီး ပြောတဲ့အတိုင်း လုပ်ဆောင်နိုင်ချေရှိသူတွေကိုပဲ လက်ထပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ကူးယဉ်သက်သက်ပဲဆိုရင်တော့ သင့်ရည်ရွယ်ချက်တွေ ဘယ်လောက်ပဲကောင်းကောင်း အသိအမှတ်ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူး။
၃။ သူမနဲ့ အနာဂတ်မိသားစုကို စောင့်ရှောင်နိုင်လို့ပါ။ သူမကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရုံသာမက ခင်ပွန်းကောင်း၊ ဖခင်ကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်နိုင်သူကိုသာ လက်ထပ်ချင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးအနှီးလဲတတ်လား မလဲတတ်ဘူးလားဆိုတာတွေ မေးမြန်းနေမှာမဟုတ်ပေမယ့် သင့်မှာ မိသာစုတစ်ခုကို စောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းတွေ ရှိမရှိဆိုတာကိုတော့ စောင့်ကြည့်ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။
၄။ သင့်ဖက်က လုံးဝသေချာပြီး အဆင်သင့်ဖြစ်နေလို့ပါ။ မိန်းကလေးတွေက သင့်ဖက်က သူမကို ဘ၀တစ်သက်တာလက်တွဲဖို့ သေချာဆုံးဖြတ်ထားမထားကို ခံစားနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
၅။ အပြန်အလှန် အချစ်တွေ ခိုင်မြဲနေလို့ပါ။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အရမ်းချစ်မိနေပြီဆိုရင်တော့ အခြားဘာကိုမှ စဉ်းစားမနေတတ်တော့ပါဘူး။ တစ်ခါတစ်လေကျတော့လည်း မိန်းကလေးတွေက အချစ်ကို ရှေ့တန်းတင်ပြီး မဆုံးဖြတ်တတ်ကြဘူးဆိုတာကိုတော့ သတိပြုပါ။
သငျခဈြရတဲ့ မိနျးကလေးတဈယောကျက သငျ့ကို ငွငျးပယျလိုကျမှာလား၊ ခဈြသူအဖွဈနဲ့ လကျခံမှာလား၊ ပွီးတော့ လကျထပျပွီး ဘဝတဈခုလုံးလကျတှဲသှားမှာလားဆိုတာကို သိခငျြပါသလား။ ဒီလိုကိစ်စနဲ့ ပတျသကျပွီး မိနျးကလေးတဈယောကျက စိတျထဲမှာ ဆုံးဖွတျခကျြတှအေမြားကွီးခမြှတျလရှေိ့ပါတယျ။ သူတို့က အခြိနျယူပွီး ဆုံးဖွတျတတျကွသလို သငျနဲ့ပတျသကျပွီး ခံစားခကျြတှကေအစ အရာအားလုံးကို အသေးစိတျအထိ စောငျ့ကွညျ့ လလေ့ာသုံးသပျတတျကွပါတယျ။
ဒီလိုအဖွဈမြိုးက လကျခံနိုငျဖို့ ခကျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ မိနျးကလေးတှကေ သူတို့အတှကျ အဆငျမပွဘေူးထငျရငျ ငွငျးပယျလိုကျဖို့ ဆုံးဖွတျတတျကွပါတယျ။ သငျငွငျးပယျခံရနိုငျတဲ့ အကွောငျးရငျးတှကေတော့ –
၁။ သူမကို မဆှဲဆောငျနိုငျလို့ဖွဈပါတယျ။ မိနျးကလေးတိုငျးမှာ သူတို့ကွိုကျတဲ့ ယောင်ျကြားလေးပုံစံတှေ ရှိတတျပါတယျ။ သငျက ပုံစံမဝငျဘူးဆိုရငျတော့ ငွငျးပယျခံရမြာ ကြိနျးသေးပါတယျ။ ဆှဲဆောငျမှုရှိဖို့က အရေးကွီးပါတယျ။ သငျ့အနနေဲ့ မငျးသားရှုံးအောငျ ခြောလှနဖေို့မလိုပါဘူး။ သူမစိတျကို လှမျးမိုးနိုငျစှမျးရှိရငျ လုံလောကျပါပွီ။
၂။ ရငျခုနျစိတျလှုပျရှားစရာမရှိလို့ပါ။ သူမအတှကျ စိတျလှုပျရှားစရာမရှိပဲ ပငျြးစရာကောငျးနမေယျ။ စနိုးစနောငျ့ဖွဈနမေယျဆိုရငျလညျး ငွငျးပယျတတျကွပါတယျ။
၃။ သငျ့ရဲ့အလုပျအကိုငျကို မကွိုကျလို့ ဒါမှမဟုတျ အလုပျမရှိလို့ပါ။ ယနခေ့တျေမိနျးကလေးတှကေ သူတို့ရဲ့ ဘ၀နထေိုငျမှုပုံစံကို ပံ့ပိုးဖွညျ့ဆညျးပေးနိုငျတဲ့သူမြိုးကို အလိုရှိကွတာဖွဈပါတယျ။ သူတို့ အသုံးစရိတျကို ကာမိအောငျတောငျမှ ဝငျငှမေရှိတဲ့သူမြိုးဆိုရငျ စိတျမဝငျစားတတျကွပါဘူး။
၄။ သငျ့မှာ သူတို့မကွိုကျတဲ့အခကျြတှရှေိနလေို့ပါ။ ဆေးလိပျသောကျတတျတာ၊ အရကျသောကျတာ၊ မူးယဈဆေးသုံးတာ၊ လောငျးကစားလုပျတတျတာ ဒီလိုအကငျြ့တှကေို မိနျးကလေးတှကေ သဘောမကတြတျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ဒီအခကျြတှကေို ပွငျနိုငျမယျဆိုရငျတော့ နီးစပျနိုငျခရြှေိပါသေးတယျ။
၅။ မိနျးကလေးစိတျကွောငျ့ပါ။ ဒီအခကျြက ရှငျးပွဖို့ခကျပါတယျ။ သငျ့ရဲ့နာမညျအစ စာလုံးကို မကွိုကျတာက စပွီး ဘယျသနျဖွဈနလေို့ဆိုတာအထိ အကွောငျးပွခကျြအမြိုးမြိုးနဲ့ ငွငျးတတျကွတာမြိုးပါ။
ခဈြသူဖွဈပွီဆိုရငျ စစေ့ပျကွောငျးလမျးတာတှေ၊ ထိမျးမွားလကျထပျတာတှအေထိ ဆကျသှားနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အပြျောမစောပါနဲ့ဦး။ ခဈြသူအဖွဈတှဲနကေခြိနျမှာ လကျထပျဖို့အထိ တှေးထားခငျြမှ တှေးထားမှာပါ။ သူတို့က သငျ့ကိုလလေ့ာသုံးသပျဦးမှာဖွဈပါတယျ။ သငျ့ကို ခဈြသူအဖွဈလကျခံနိုငျတဲ့ အကွောငျးရငျးတှကေတော့ –
၁။ သငျကဆှဲဆောငျမှုရှိလို့ပါ။ သူမသဘောကတြဲ့ အမြိုးသားပုံစံမြိုးဖွဈပွီး သူမကို ရယျမောပြျောရှငျစနေိုငျသူ ဖွဈရငျ ခဈြသူအဖွဈလကျတှဲဖို့ တဝကျလောကျသခြောနပေါပွီ။ သူမကို ခဈြခငျကွငျနာပွီး စိတျခမျြးသာစနေိုငျကွောငျး ပွနိုငျရငျတော့ သူမလကျကို ကိုငျရဖို့ သခြောပါပွီ။
၂။ အိပျရာထဲမှာ တျောလို့ပါ။ ဒီအခကျြက မွနျမာယဉျကြေးမှုနဲ့ မကိုကျညီပါဘူး။ အနောကျနိုငျငံတှမှော အတူနဖွေဈပွီးမှ ခဈြသူအဖွဈ ရှဆေ့ကျလကျတှဲတာမြိုးတှကေို ဆိုလိုပါတယျ။ အိပျရာထဲကကိစ်စမှာ သငျတို့နှဈဦးစလုံးက ရုပျပိုငျးဆိုငျရာရော၊ စိတျခံစားမှုပိုငျးမှာပါ အခငျြးခငျြးကနြေပျမှု ရှိမရှိနဲ့ဆိုငျပါတယျ။
၃။ သူနဲ့အတူရှိခြိနျတှကေ ပြျောဖို့ကောငျးလို့ပါ။ နှဈဦးသား အတူရှိနခြေိနျမှာ အခြိနျကုနျလို့ ကုနျသှားမှနျးမသိ ပြျောနရေတာမြိုးကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။
၄။ သငျကလိုကျလြောညီထှနေတေတျလို့ပါ။ နှဈဦးသား ဘဝကို အပွနျအလှနျလေးစားမှုရှိပွီး အဆငျမပွနေိုငျတာတှေ မတောငျးဆိုတတျတာမြိုးတှကွေောငျ့ပါ။ သငျကိုယျတိုငျလညျး အလုပျနဲ့ ကိုယျရေးကိုယျတာခှဲခွားထားတတျပွီး သူမစိတျတိုငျးကြ လိုကျလြောညီထှဖွေဈအောငျ နပေေးနိုငျလို့ ဖွဈပါတယျ။
၅။ သူမကိုလေးစားသမှုရှိလို့ပါ။ ခဈြသူအဖွဈလကျတှဲဖို့ စဉျးစားနခြေိနျမှာကတညျးက သူမကို တခွားသူငယျခငျြးတှလေို ဆကျဆံလို့မဖွဈပါဘူး။ အလေးထားပွီး ဦးစားပေးဆကျဆံတာမြိုးတှကေို မိနျးကလေးတှကေ လိုခငျြကွတာဖွဈပါတယျ။
ဒီကိစ်စကို လှယျတာလညျးရှိသလို ခကျတာလညျးရှိပါတယျ။ တဈခြို့တှကေ ခဈြသူအဖွဈနဲ့ လကျခံလိုကျပွီဆိုကတညျးက ဆုံးဖွတျပွီးသားဖွဈနတေတျပမေယျ့ တဈခြို့တှကေတော့ သူတို့နဲ့ တဈသကျလုံး လကျတှဲသှားနိုငျသူဟုတျမဟုတျ အခြိနျယူသုံးသပျကွဦးမှာဖွဈပါတယျ။ သငျ့ကို လကျထပျဖို့ ဆုံးဖွတျနိုငျတဲ့ အကွောငျးရငျးတှကေတော့ –
၁။ သူမကို ပံ့ပုံပေးနိုငျလို့ပါ။ ငှကွေေးကိစ်စတှကေိုခညျြးပဲ ဆိုလိုတာမဟုတျပါဘူး။ အမြားကလကျခံထားတဲ့အတိုငျး ယောင်ျကြားလေးက မိနျးကလေးကို လိုအပျတဲ့ပံ့ပိုးမှုတှေ ပေးနိုငျတာမြိုးကို ဆိုလိုပါတယျ။
၂။ သငျ့မှာ အလားအလာကောငျးတှရှေိလို့ပါ။ မိနျးကလေးတှဟော ရညျမှနျးခကျြရှိပွီး ပွောတဲ့အတိုငျး လုပျဆောငျနိုငျခရြှေိသူတှကေိုပဲ လကျထပျမှာဖွဈပါတယျ။ စိတျကူးယဉျသကျသကျပဲဆိုရငျတော့ သငျ့ရညျရှယျခကျြတှေ ဘယျလောကျပဲကောငျးကောငျး အသိအမှတျပွုမှာမဟုတျပါဘူး။
၃။ သူမနဲ့ အနာဂတျမိသားစုကို စောငျ့ရှောငျနိုငျလို့ပါ။ သူမကို ပံ့ပိုးပေးနိုငျရုံသာမက ခငျပှနျးကောငျး၊ ဖခငျကောငျးတဈယောကျ ဖွဈနိုငျသူကိုသာ လကျထပျခငျြကွတာဖွဈပါတယျ။ ကလေးအနှီးလဲတတျလား မလဲတတျဘူးလားဆိုတာတှေ မေးမွနျးနမှောမဟုတျပမေယျ့ သငျ့မှာ မိသာစုတဈခုကို စောငျ့ရှောကျနိုငျတဲ့ အရညျအခငျြးတှေ ရှိမရှိဆိုတာကိုတော့ စောငျ့ကွညျ့ဆုံးဖွတျပါလိမျ့မယျ။
၄။ သငျ့ဖကျက လုံးဝသခြောပွီး အဆငျသငျ့ဖွဈနလေို့ပါ။ မိနျးကလေးတှကေ သငျ့ဖကျက သူမကို ဘဝတဈသကျတာလကျတှဲဖို့ သခြောဆုံးဖွတျထားမထားကို ခံစားနိုငျစှမျးရှိပါတယျ။
၅။ အပွနျအလှနျ အခဈြတှေ ခိုငျမွဲနလေို့ပါ။ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ အရမျးခဈြမိနပွေီဆိုရငျတော့ အခွားဘာကိုမှ စဉျးစားမနတေတျတော့ပါဘူး။ တဈခါတဈလကေတြော့လညျး မိနျးကလေးတှကေ အခဈြကို ရှတေ့နျးတငျပွီး မဆုံးဖွတျတတျကွဘူးဆိုတာကိုတော့ သတိပွုပါ။
Previous: အများရှေ့မှာ စကားပြောနိုင်ဖို့ နည်းလမ်း(၃)ခု
Next: သမိုင်းတလျှောက် အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုဟ် (၁၀)ဦး